4 qayb Furimaha dhirta
Custom Delrin CNC Caaga Machined HYVW30001
HY iibin kulul Furimaha Dhirta HYSZ100004
OEM CNC Machining Birta Baaskiilada Qaybo HYVC020004
Qaybaha Machining OEM Aluminium Anodized HYVC020003
Huayi Tobacco grinder HYZA07002
Bling Bling 4 lakab Grinder Fashion HYVC020002
HUAYI OEM Anodized Aluminium Geed Grinder HYVC020001
Huayi 4 Pieces Furimaha Dagaalka geedaha HYZA07001
HUAYI Herb Furimaha HYWL60001
Magaca badeecada: 4 qaybood oo ah Furimaha Dhirta
Waxyaabaha: Aluminium T6061
Dhammaadka dushiisa: Midabka qallafsan
4-qaybood Furimaha Dhirta, oo ka samaysan Aluminium T-6061, oo ah aalad cylindrical ah oo leh 4 qaybood oo kala go'a oo leh ilkaha ama biinanka oo isku toossan si marka qaybta sare loo leexiyo, walxaha gudaha ku jira la jeexo. Qaybta 3aad waxaa lagu soo ururiyaa qaar la jeexjeexay qolka hoose oo la sifeeyo xoogaa kief ah. Qeybta 4 -aad waxaa la soo aruuriyay kief ..
U dir baadhitaan Email noo soo dir
4 lakabyo Booqday Furimaha Dhirta
Tallaabada 1: Ka qaad daboolka sare. Isticmaal farahaaga si aad u burburiso burooyinkeeda waaweyn oo aad dhex dhigto ilkaha shiidiinka. Ha ku dhibin inaad wax buro ah geliso xarunta tooska ah –waana meeshii birlabduhu u kala jajaban yihiin, markaa wax xarunta dhexdeeda ah ma burburin doonto.
Tallaabada 2: Ku beddel meesha ugu sarreysa Furimaha Furimaha oo sii ku dhawaad ​​10 wareeg, ilaa ay biqilkii oo dhan ka soo daatay godadkii. Waxaad ka saari kartaa dusha sare oo ku dheji dhinaca mashiinka Furimaha Shiine si ay gacan uga geysato dabcinta wax kasta oo dhegdheg ah oo ku dheggan ilkaha.
Tallaabada 3: Ku fur qolka ilkaha si aad u hesho lakabka dambiisha oo haya dhammaan xashiishaddaada cusub. Ku shub tuubadaada, wadajirkaaga, ama afxumada oo ku raaxayso!
Tallaabada 4: Markaad ku soo aruuriso xoogaa kief qolka hoose, ku xoq qaar ka mid ah warqad ama aaladda xoqidda ee la bixiyay (ma aha dhammaan iibsashada Booqdaha mid ayaa ku jiri doona, laakiin hubaal inay yihiin kuwo waxtar leh). Mar labaad, waxaad ku rushayn kartaa kief baaquli si aad uga dhigto mid awood badan, ama u keydi wax kale. Ka digtoonow kuwa birta xoqda, maadaama ay xoqin karaan walxaha aluminium oo ay weheliyaan kief -kaaga!
TILMAAMAHA WAXA KU JIRA
- Waajibaad culus oo dusha sare ku yaal sanadihii la isticmaalay.
- 500 miirayaasha shaashadda micron / hoos ugu dhaadhaca qolka hoose (waxaa ku jira spatula yar si aad u soo ururiso).
- Si sahal ah u shiid dhir udgoon/geedo/biqil adigoon ka tagin jajabyo waaweyn - Xataa geedo cusub oo qoyan.
- Dabool xoog leh oo birlabdiid ah ayaa ku dheggan birlabyada xoogga leh ee neodymium, si aad u isticmaali karto Furimahaan kaydinta geedaha.
- Dhammaadka Qoryaha Quruxda leh ee birta ayaa xoqan u adkaysta waxayna kaa caawineysaa inaad keydiso WAQTIGA iyo LACAGTA - Adeegso wax yar isla natiijooyin isku mid ah.
Hore: Booqda haramaha oo leh Logo Custom
Xiga: Furimaha geedka aluminium
Magaca badeecada: Furimaha geedka Aluminium
Magaca Calaamadda: Huayi
Dhammaadka dushiisa: Anodizing
Furimaha Dhirta Aluminium, oo ka samaysan Aluminium T-6061, oo ah ilko fudud oo fiiqan, si fududna loo qabsan karo.
Grinders Tubaakada dhirta
Tumble Weed Furimaha
Booqda haramaha oo leh Logo Custom
Custom 4 lakabka Furimaha Doogga HYCZ90001
Astaanta caadada u ah caleenta caleenta geedaha HYCZ90003
Booqday caleenta cawska
Furimaha Dhirta Dhirta